တရုတ်မျက်နှာ Brush သတ်မှတ်မည်, မျက်နှာ Brush, Powder Brush ထုတ်လုပ်သူ
ဖေါ်ပြချက်:မကျြနှာကို Brush သတ်မှတ်မည်,မကျြနှာကို Brush,အမှုန့် Brush,အရည်ဖောင်ဒေးရှင်းက Brush,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > မကျြနှာကို Brush
မကျြနှာကို Brush ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မကျြနှာကို Brush သတ်မှတ်မည်, မကျြနှာကို Brush ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အမှုန့် Brush R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အသေးစားခရီးသွားအရွယ်အစားဖောင်ဒေးရှင်းသည်စုတ်တံများပါ ၀ င်သည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခရီးသွား for ည့်သည်များအတွက် Yacai Mini 7pcs Makeup Brush Set  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Petal Brush Flat Trace ဖောင်ဒေးရှင်းမရှိပါ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Black ကဆံပင်အလှကုန် Brush  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နိုင်လွန်ဆံပင်နှင့်အတူရောင်စုံဝါသနာရှင် Brush  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆိတ်သငယ်ကိုဆံပင်အမှုန့်ဖြီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အဖြူ၏တစ်ခုတည်းသောအမှုန့်ဖြီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မိတ်ကပ်အဘို့ချစ်စရာကောင်းခရမ်းရောင်အတိုလက်ကိုင်ပန်ကာဖြီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
baboo လက်ကိုင်မကျြနှာကိုအမှုန့်ဖြီးမိတ်ကပ်ဖြီးကိရိယာအစုံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သစ်သားလက်ကိုင်နှင့်အတူအမှုန့်ဖြီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သိုးမွှေးကြေးနီ ferrule သစ်သားလူပျိုဖြီးမိတ်ကပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အမှုန့်လူပျိုအလှကုန်မိတ်ကပ် Brush  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အမျိုးသမီးအလှကုန်အဘို့အရောင်စုံမိတ်ကပ် Brush  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တစ်ခုတည်းမိတ်ကပ် brush ကို set ကိုလက္ကား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Charm ခရမ်းရောင်နှင့်အတူ kabuki Brush  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သစ်သားလက်ကိုင်နှင့် Synthetic ဆံပင်နှင့်အတူအမှုန့် Brush  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အသေးစားခရီးသွားအရွယ်အစားဖောင်ဒေးရှင်းသည်စုတ်တံများပါ ၀ င်သည်
ထုပ်ပိုး: Carton သေတ္တာပါသော Opp အိတ်၊ စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးထားခြင်းကိုငြင်းပယ်နိုင်သည်
Supply နိုင်ခြင်း: 200000set/months
အသေးစားခရီးသွားအရွယ်အစားဖောင်ဒေးရှင်းသည်စုတ်တံများပါ ၀ င်သည် ဒီပန်းချီကားတစ်ချပ်သည်အရောင် ၃ မျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဆံပင်၊ သဘာဝသစ်သားလက်ကိုင်နှင့်ရွှေတောက်ပသောလူမီနီယံပြွန်များပေါင်းစပ်ထားသည်။ နေ့စဉ်မိတ်ကပ် artistry အတွက်လိုအပ်သော Professional...
ခရီးသွား for ည့်သည်များအတွက် Yacai Mini 7pcs Makeup Brush Set
ထုပ်ပိုး: package ကိုဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဖြစ်လုပ်လိမ့်မည်။
ထုတ်ကုန်အကြောင်း ထိတွေ့မှုမှနူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောစုတ်တံများသည်သိပ်သည်းပြီးကောင်းစွာပုံဖော်ထားသည်။ မိတ်ကပ်လိမ်းရန်နူးညံ့သော်လည်းခိုင်မာသည့်အပြင်မိတ်ကပ်လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလည်းဆူးလေများသည်မကျဆင်းပါ။ Synthetic & အဆင့်မြင့်သောသဘာဝ Brush...
Petal Brush Flat Trace ဖောင်ဒေးရှင်းမရှိပါ ဒီတစ်ခုတည်းသော Fundation စုတ်တံအစုံသည်နူးညံ့သောဒြပ်ဆံပင်များ၊ ပလက်စတစ်လက်ကိုင်များဖြစ်သည်။ Professional ဒီဇိုင်း၊ နေ့စဉ်မိတ်ကပ် artistry အတွက်လိုအပ်သောဖြီး။ သင်ကပိုင်ဆိုင်ပြီးတာနဲ့သင်ကထာဝရထာဝရချစ်လိမ့်မယ်။...
Black ကဆံပင်အလှကုန် Brush
ထုပ်ပိုး: အထုပ် customer`s လိုအပ်ချက်များကိုအဖြစ်ကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည်။
မှတ်တမ်းသစ်သားလက်ကိုင်နှင့်အနက်ရောင်ဒြပ်ဆံပင်ပေါင်းစပ်နှင့်အတူအမှုန့်ဖြီးသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖျ Powder Brush မှတ်တမ်းအရောင်သစ်သားလက်ကိုင်နှင့်လူမီနီယံပြွန်၏အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော application များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။...
ဝါသနာရှင် Brush နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဖြတ်ညင်သာစွာတစ်ဦးရဲမီးမောင်းထိုးပြဘို့အမှုန်အပေါ်ချင်းနှင်းနှင့် dusts ချောမွေ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးသင့်ရဲ့အသားအရေမှထုတ်ကုန်လွှဲပြောင်းရန်ကူညီပေးသည် အဆိုပါမိတ်ကပ် brush ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း...
ထုတ်ကုန်အကြောင်း: တို့ထိရန်ပျော့ပျောင်းနှင့်တောက်ပခြင်း, စုတ်တံသိပ်သည်းခြင်းနှင့်ကောင်းစွာပုံဖော်ကြသည်။ soft ပေမယ့်မိတ်ကပ်လျှောက်ထားရန်အခိုငျအမာ, အ bristles လည်းမိတ်ကပ်လျှောက်လွှာဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာထွက်ကျကြပါဘူး။ ဒြပ် & အဆင့်မြင့်သဘာဝတရား Brush...
ဤသည်က၎င်း၏ဒဏ်ငွေနန်းကြိုးအမျှင်လေးများလူသိများဖြီး, ဇိမ်ခံနူးညံ့မှုနှင့်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောအမှုန့်လျှောက်လွှာ, အ nanowire ဂုဏ်သိက္ခာမိတ်ကပ်စုတ်တံများတွင်အသုံးပြုသော softest bristles များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာဖျော်ဖြေဖို့အင်ဂျင်နီယာဒြပ်...
ထုပ်ပိုး: ပုံး box ကိုစိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးနှင့်အတူ Opp အိတ် negociated နိုင်ပါသည်
မိတ်ကပ်အဘို့ချစ်စရာကောင်းခရမ်းရောင်အတိုလက်ကိုင်ပန်ကာဖြီး ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောဝါသနာရှင်ဖြီးပျော့ဒြပ်သိုးမွှေး, သဘာဝသစ်သားလက်ကိုင်နဲ့တောက်ပလူမီနီယံပြွန်ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းနေ့စဉ်မိတ်ကပ် artistry အတှကျလိုအပျသောဖြီး။...
baboo လက်ကိုင်မကျြနှာကိုအမှုန့်ဖြီးမိတ်ကပ်ဖြီးကိရိယာအစုံ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောအမှုန့်ဖြီးပျော့ဒြပ်သိုးမွှေး, သဘာဝသစ်သားလက်ကိုင်နဲ့တောက်ပလူမီနီယံပြွန်ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းနေ့စဉ်မိတ်ကပ် artistry အတှကျလိုအပျသောဖြီး။...
အပြစ်ကင်းစင်စွာချောင်အမှုန့်ရိုးအမြစ်ကိုသက်ဆိုင်ပါသည်။ 1, ကောင်းသောလက်ကိုင်ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်း, သင့်မျက်နှာလှပသောကြည့်, သင်တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောစိတ်ဓါတ်များနေ့စဉ်ပေးပါစေ။ 2, ဒီဖြီးသက်ဆိုင်နှင့်သင့် features...
သိုးမွှေးကြေးနီ ferrule သစ်သားလူပျိုဖြီးမိတ်ကပ်
သိုးမွှေးကြေးနီ ferrule သစ်သားလူပျိုဖြီးမိတ်ကပ် ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောအမှုန့်ဖြီးပျော့ဒြပ်သိုးမွှေး, သဘာဝသစ်သားလက်ကိုင်နဲ့တောက်ပလူမီနီယံပြွန်ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းနေ့စဉ်မိတ်ကပ် artistry အတှကျလိုအပျသောဖြီး။ သင်ကပိုင်ဆိုင်တစ်ပြိုင်နက်,...
yacai ကနေဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ်စုတ်တံ, မိတ်ကပ် brush ကိုပုံတွင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးရောင်းချမရှိမဖြစ်ဖြီး, ပျော့ပျောင်းသောဆံပင်, ကောင်းမွန်သောပစ္စည်းအခြေစိုက်စခန်းထဲကနေဖြစ်ပါတယ်။...
ဤသည်လူပျိုမိတ်ကပ် Brush လူမီနီယံ ferrules နှင့်အတူလက်ထွင်းထုစုတ်တံ၏ခမ်းနားထည်ဝါစွာဌန်ဖြစ်ပါတယ်။ နယ်လှည့်နှင့်သိုလှောင်မှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော။ သင်တစ်ဦးဇိမ်ခံမိတ်ကပ် application များအတွက်လိုအပ်သမျှ။ * Synthetic ဆံပင်မိတ်ကပ်ဖြီး * Amazing...
တစ်ခုတည်းမိတ်ကပ် brush ကို set ကိုလက္ကား
တစ်ခုတည်းမိတ်ကပ် brush ကို set ကိုလက္ကား ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောအမှုန့်ဖြီးပျော့နှစ်ခုကိုအရောင်များဒြပ်ဆံပင်, ပလတ်စတစ်ဝက်အူပုံသဏ္ဍာန်လက်ကိုင်နှင့်လူမီနီယံ Ferrule ပြွန်ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းနေ့စဉ်မိတ်ကပ် artistry အတှကျလိုအပျသောဖြီး။...
Charm ခရမ်းရောင်နှင့်အတူ kabuki Brush
အကြီးစားအလွယ်တကူလည်ပင်း, မျက်နှာအနှံ့ bronzers နှင့်မီးမောင်းထိုးပြချင်းနှင်းဖြတ်ဝိုင်းပါတယ်။ ချောမွေ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးသင့်ရဲ့အသားအရေမှထုတ်ကုန်လွှဲပြောင်းရန်ကူညီပေးသည် ဒီဖြီးသက်ဆိုင်နှင့်သင့် features...
သစ်သားလက်ကိုင်နှင့် Synthetic ဆံပင်နှင့်အတူအမှုန့် Brush
ဤသည်က၎င်း၏ဒဏ်ငွေနန်းကြိုးအမျှင်လေးများလူသိများဖြီး, ဇိမ်ခံနူးညံ့မှုနှင့်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောအမှုန့်လျှောက်လွှာ, ထိုဒြပ်ဆံပင်ဂုဏ်သိက္ခာမိတ်ကပ်စုတ်တံများတွင်အသုံးပြုသော softest bristles များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။...
တရုတ်နိုင်ငံ မကျြနှာကို Brush ပေးသွင်း
ဒီနေရာတွင် မကျြနှာကို Brush အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ငါတို့ မကျြနှာကို Brush သတ်မှတ်မည်,မကျြနှာကို Brush,အမှုန့် Brush,အရည်ဖောင်ဒေးရှင်းက Brush,, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပို့ကုန်အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်ကုန်သေချာစေရန် မကျြနှာကို Brush ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ပါပြီ။
သငျသညျ မကျြနှာကို Brush အတွက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, parameters တွေကို, မော်ဒယ်များ, ပုံများ, စျေးနှုန်းများနှင့် မကျြနှာကို Brush သတ်မှတ်မည်,မကျြနှာကို Brush,အမှုန့် Brush,အရည်ဖောင်ဒေးရှင်းက Brush,, အကြောင်းကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို click ပါ။
သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးချင်းစီများမှာမည်သို့ပင်ကျနော်တို့ မကျြနှာကို Brush အကြောင်းကိုတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးအတတျနိုငျဆုံးမည်!
မကျြနှာကို Brush သတ်မှတ်မည် မကျြနှာကို Brush အမှုန့် Brush အရည်ဖောင်ဒေးရှင်းက Brush မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်